အမေကျော်ဒွေးတော်လွမ်းကြသူ ပြည်ပ သတင်းမီဒီယာများသို့ ~ Myanmar Express
အမေကျော်ဒွေးတော်လွမ်းကြသူ ပြည်ပ သတင်းမီဒီယာများသို့
From : အာရိယံနွယ်တလျှောက်လုံးလိုလို- ဘင်္ဂါလီကို ရိုဟင်ဂျာဆိုပြီး အသက်သွင်းပေးနေတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေ ခင်ဗျားတို့တွေ- ခု ရခိုင်ပြည်မှာ ရခိုင်ဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေ ခံနေရတာတွေ ခင်ဗျားတို့တွေ သိလောက်ရောပေါ့။ရခိုင်အမျိုးသမီးကို ဘင်္ဂါလီမူဆလင်(ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံ) (၃)ယောက်က အတင်းအဓမ္မကျင့် လည်လှီး ရက်ရက်စက်စက်သတ်ဖြတ်တာကိုကျတော့ ခင်ဗျားတို့ သိပ်သိမြင်ချင်ကြပုံ မပေါ်ဘူး။ ရခိုင်တွေဟာ ဘယ်လူမျိုးကိုမှ အဲလိုမျိုး ရက်စက်ရမ်းကားခဲ့ဖူးတာ မရှိခဲ့ဖူးဘူးဆိုရင် မမှားနိုင်ဘူး။ ရခိုင်တွေကိုပဲ ဘင်္ဂါလီမူဆလင်တွေက အဲလိုလုပ်တာခံလာခဲ့ရတာပဲရှိတာ။ မူဂျာဟစ်- ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံ ဘင်္ဂါလီတွေဟာ ခုလိုမျိုးဘဲ ရခိုင်တွေ ထောင်ပေါင်းများစွာကိုသတ်၊ ရခိုင်သ္မီးပျိုလေးတွေကို မိဘ၊မောင်ဖွားရှေ့မှာ ဓားထောက်အတင်းအဓမ္မစော်ကား- ရခိုင်ရွာတွေကို မီးရှုံးဖျက်ဆီးတာတွေကို ရခိုင်တွေ အများကြီးခံစားလာခဲ့ကြရတာ။ ဒါတွေကျတော့ ခင်ဗျားတို့ မသိမမြင်ချင်ယောင်ဆောင်နေတာဟာ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ရခိုင်လူမျိုးတွေအပေါ်မှာထားတဲ့ တိုင်းရင်းသား စိတ်ဓာတ်ဆိုတာများလား။ခုလဲ ဘ၀အရေးအတွက် နွမ်းနွမ်းပါးပါး ရိုးသားစွာ လုပ်ကိုင်ရပ်တည်နေတဲ့ ရခိုင်အမျိုးသ္မီးလေးတယောက်ကို ဘင်္ဂါလီမူဆလင် (၃)ယောက်က အဓမ္မကျင့် ရက်ရက်စက်စက်သတ်ဖြတ်ပြီးမှသာ- အဲဖြစ်ရပ်နောက်ပိုင်းမှ ရခိုင်တွေကမခံနိုင်လို့ တုံ့ပြန်တာကိုကျတော့ ရခိုင်တွေကို ရမ်းကားသူတွေလဲဘာလဲ အပြစ်ပုံချင်ကြတယ်။ ကျနော်ပြောချင်တာ အကြမ်းဖက်တာကို လက်ခံအားပေးတဲ့သဘောမပါဘူး။ ဆိုလိုချင်တာက အဲလိုဖြစ်လာရတဲ့ ပြဿနာကို ဘက်လိုက်မှုကင်းကင်းနဲ့ ရှုမြင်ကာကွယ် တားဆီးဖို့လိုတာကို ထောက်ပြနေတာ။ ခင်ဗျားတို့တွေခုလိုမျိုး ဘင်္ဂါလီကို အားပေးအားမြှောက်လုပ်ပေးနေလို့- ရခိုင်တို့ရဲ့ အမျိုးသားရေး လက္ခဏာတွေ ပျောက်ကွယ်တော့မယ်။ ခင်ဗျားတို့တွေရဲ့ ဗမာအမျိုးသ္မီးကို ဘင်္ဂါလီတွေ အဲလိုပြုကျင့်ရင်- ခင်ဗျားတို့တွေ သည်းခံ သဘောထားကြီးနိုင်ပါ့မလား။ဗမာတွေဟာ ရခိုင်တို့ရဲ့ရန်သူမဟုတ်သလို ဘင်္ဂါလီတွေရောပဲ။ ဒါပေမဲ့အမျိုးသားရေး လက္ခဏာကို ထိပါးလာနေတာကိုတော့ သမိုင်းပေးတာဝန် အမျိုးသားရေး တာဝန် သတိအသိအရ ကာကွယ်ရမှာဟာ လူတိုင်းရဲ့တာဝန်ပါဘဲ။ရခိုင်လူမျိုးတွေဟာ၊ ဘင်္ဂါလီ(ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံ)တွေရဲ့ ရက်စက်ရမ်းကားမှုတွေကို- ခေတ်အဆက်ဆက် ခံလာရတာကို ဘယ်လူတွေက ဘာကာကွယ်ပေးခဲ့လို့လဲ။ တဖြေးဖြေးနဲ့ ရခိုင်တို့ရဲ့ အမျိုးသားရေး လက္ခဏာတွေသာ ၀ါးမြို ဖျက်ဆီးခံရလို့ အားလုံးနီးပါး ပျောက်ကွယ်ကုန်ပြီ။ ကျုပ်ပြောနေတာဟာ ဘယ်လူမျိုးကိုမှ မုန်းတီးတဲ့စိတ်မပါဘူး။ လူတိုင်းဟာ ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသားရေးလက္ခဏာကို ကာကွယ်ခွင့်ရှိတယ်။ ဒါဟာ လူ့အခွင့်အရေးမည်တယ်။ ဒီဘင်္ဂါလီတွေဟာ တရားဝင်နေထိုခွင့်ရှိလို့- ဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေကို ဒုက္ခမပေးဘဲ အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ နေထိုင်ရင် ကျုပ်တို့က အတင်းမောင်းထုတ်ပြစ်ဖို့လဲမတောင်းဆိုဘူး။ ရခိုင်တွေဟာ ဗုဒ္ဓတရားဓမအဆုံးအမကိုသက်ဝင်ယုံကြည်ကြသူများနည်းတူ- အဲဒီဗုဒ္ဓတရားတော်တွေထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းဘဲ တပါးလူတွေရဲ့အခွင့်အရေးကို လေးစားလိုက်နာရမှာတို့၊ မေတ္တာထားသဘောထားကြီးရမှာတို့ဆိုတာကို လက်ခံယုံကြည်ကြသူများဖြစ်တယ်။ တဖက်မှာလဲ ကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေး၊ အမျိုးသားရေးလက္ခဏာတွေကို ကာကွယ်ရမယ်ဆိုတာဟာ လူသားတိုင်းရဲ့ ဗီဇအသိတွေထဲကတခုပါဘဲ။ ကိုယ့်အမျိုးကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမည်မှာ လူသားမှာပဲရှိတဲ့အသိပဲ။ ဘယ်လူမှလဲတိုက်တွန်းနေစရာမလိုပါဘူး။တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို လူတိုင်း လိုလားတယ်။ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှသာ လူ့ဘောင်သာယာ ငြိမ်းချမ်းမယ်ဆိုတာယုံကြည်တယ်။ တဖက်မှာလဲ ပြဿနာ အကြောင်းအရာတခုအပေါ်မှာ ဘက်နှစ်ဘက်ကို မျှမျှတတရှုမြင်ဖို့- စပြီးတော့ ဖြစ်လာရတဲ့အကျိုးဆက်ကို မျှမျှတတကြည့်တတ်ဖို့ အရေးကြီးတယ်။ ဒါမျိုးကသာ စစ်မှန်တဲ့ အရည်အချင်းပြည့်ဝတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အလုပ်ဘဲ။ စစ်မှန်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုတာ ကိုယ်ပိုင် စိတ်ခံစားမှုကို ဦးစားမပေးဘဲ ပကတိအနေအထားကို ရှုမြင်တတ်မှ ခေါင်းဆောင်မည်တယ်။ ဒီတော့ ခင်ဗျားတို့တာဝန်ရှိတဲ့ ဗမာအာဏာပိုင်တွေက မကာကွယ်ပေး၊ တာဝန်မဲ့နေရင်တော့- ရခိုင်တွေဟာ သူတို့ရဲ့ အမျိုးသားရေးလက္ခဏာကို သူတို့ဟာသူတို့ ကာကွယ်တာဟာ တရားတယ်လို့မြင်တယ်။ဒါဟာ ရခိုင်တွေအများစုရဲ့ ခံယူချက်နဲ့အမြင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်တယ်။ဒီတော့- ကျုပ်တို့ရဲ့ အမျိုးသားလုံခြုံရေးကိုခြိမ်းခြောက်နေတဲ့ ဒီဘင်္ဂလီမူဆလင်တွေ အဆမတန်ဝင်ရောက်အခြေချလာမှုအရေးကို အရေးတကြီးကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးဖို့သက်ဆိုင်ရာ ဗမာအာဏာပိုင်များကိုတောင်းဆိုတယ်။ ဒီအရေးဟာ ရခိုင်တမျိုးသားတည်းနဲ့သာ သက်ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စမဟုတ်ပဲ- အနာဂတ်မြန်မာတပြည်လုံးအတွက်ပါ အရေးတကြီးကိုင်တွယ်ရမဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။ ဒီလိုသာ ပြဿနာအရင်းခံကို မကိုင်တွယ်မဖြေရှင်းဘဲ စောင့်ပြီး ဆက်ကြည့်နေမယ်ဆိုရင် မြန်မာတပြည်လုံးအတွက် အနာဂတ်အန္တရယ် ဖြစ်လာမှာ မလွဲဧကန်ဖြစ်တယ်။ ဒီတော့ ဒီ ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံတဲ့ ဘင်္ဂါလီမူဆလင်အရေးကို သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေ အမြော်အမြင်ကြီးကြီးနဲ့ ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းဖို့ အထူးလိုအပ်နေကြောင်း အလေးအနက်တိုက်တွန်းလိုတယ်။ထိုနည်းတူ အထူးသဖြင့် ပြည်ပ သတင်းဌာန VOA.BBC.RFA စသည်ဖြင့် တခြားသောသတင်းဌာနတွေမှာ တာဝန်ယူလုပ်ကိုင်နေကြသူတွေရော- တခြားတခြားသော လူပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ သိပါလျှက်နဲ့ မိမိတို့ရဲ့ ရပ်တည်ရေးအဆင်ပြေဖို့အတွက် အမျိုးသားရေး လက္ခဏာကို မှေးမှီအောင် လုပ်နေကြသူတွေပါမကျန် - မမြဲတဲ့တရားသဘောကို နားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့ နိုင်ငံရေးမည်သော အမျိုးဘာသာ သသနာကို ကာကွယ်တဲ့ ရပ်တည်မှုမျိုးနဲ့သာ ပြောင်းလဲရပ်တည်သင့်ကြောင်း ထောက်ပြ အကြံပြုအပ်ပါတယ်။Myanmar Express
Posted in: လူပြိန်းကြိုက် မီဒီယာသမားများ,သတင်း,မြန်မာ-ကုလား အဓိကရုဏ်းများ
12 June 2012 14:25
Fuck the all media from VOA(Myanmar),BBC(Myanmar),RFA...Stupid mother Fucker...where they was born..
i am burmese, but feel the same way as you and all rakhine people. we are brothers. i agree with you this isavery imortant national casue and we shouldn't keep quiet. we should take very strong action to drive these bingalese out our country as soon as possible. they are the cancer for your country will destroy our country unity andanation.Not only Rakine people are suffering , we all other natives like burmese, shan, kayin , kaya and other myanmars are also feeling very sad for you. pls kindly take assure on this matter we are very sorry for you and we don't know how to help you. I am very sorry that our Myanmar people has been fighting each other for several years while the acutal danger is growing like poisonous snake in our own homeland but no one dare to talk and reconginse as national danger. Now the snake is start biting to people nearby as it knows the time is right and it has the ability to bite. So what will you do with this snake? pls forgive me for writing in english as i can't type myanmar font. sorry.
Ko Norman Nayoolin
Talk to them, they are deaf. They no love country. We prevent ourself.
12 June 2012 17:28
Fuck Medias...We love Tatmadaw..Only Tatmadaw is giving protection to us.
12 June 2012 22:24
17 June 2012 08:01
ဦးတေဇ နဲ့ ကချင်ပြည်နယ် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေး ပွဲ
[image: Photo: ဦးတေဇ နဲ့ ကချင်ပြည်နယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲ Thursday, May 23, 2013 အစိုးရနှင့် ကချင်လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့ (KIO) တို့၏ လာမည့် အင်္ဂါနေ့ မြစ်ကြီ...
မိတ္ထီလာ တရားရုံး- ရုတ်ရုတ်ရက်ရက်ဖြစ်ပွားခဲ့
မိတ္ထီလာတစ်မြို့လုံး၊ မီးဟုန်းဟုန်းတောက်လောင်သွားရခြင်း၏ အဓိကလက်သည်များဖြစ်တဲ့ ကုလားများကို ဘုန်းကြီးသတ်မှုနှင့် အရေးယူထားရာ 21.5.2013 ရက်ေ...